နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးသင့်ဒေသများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အကာအကွယ်ရရှိရေးကို အာမခံရမည် ဟု ယူအန်အက်ဖ်ပီအေ ပြော | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ကုလသမဂ္ဂရုံ၊နယူယောက်မြို.၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်မှ ပြန်လည်ပျိုးထောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် အသက်ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ရေးကို အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲ ဟု ဒီကနေ. အလှူဒါန်ပူးပေါင်းတောင်းဆိုရေးတွင် ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံအဖွဲ.(ယူအန်းအက်ဖ်ပီအေ)ကထပ်လောင်ပြောကြားပါသည်။
ယူအန်အက်ဖ်ပီအေ အနေနဲ. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ လုံခြုံစွာ ကလေးမွေးနိုင်ရေးနှင့် အခြားသော အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးနဲ.အကာအကွယ်ရရှိရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ရန်ပုံငွေစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၇)သန်းရှာဖွေနေသည်။၎င်းတို.တောင်းဆိုထားသော အကူအညီဟာ ဆိုင်ကလုန်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသော လူပေါင်း(၂၃)သန်း၏ဘဝများနှင့် လူအဖွဲ.အစည်းများပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏အလှူငွေရရှိရေးမေတ္တာရပ်ခံချက်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားထားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အနှော့င်အယှက်ပေးသွားသော မုန်တိုင်းကြောင့် ထောင်နဲ.ချီသော ကိုယ်ဝန်းဆောင်အမျိုးသမီးများ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရသည်။တစ်လအတွင်း ကလေးစုစုပေါင်း ၄၄၀၀ ယောက်မွေးဖွားပြီး ၄၄၀ ယောက်လောက်က ခက်ခက်ခဲခဲနဲ.မွေးရခြင်း နှင့် ၂၂၀ ယောက်လောက်က အသက်လုမွေးရခြင်း (သေဆုံးနေသောမိခင်ဗိုက်ကနေဆွဲထုတ်မွေးပေးခြင်း) ရှိသည် ဟု ယူအန်အက်ဖ်ပီအေ ကခန်.မှန်းပါသည်။
ယူအန်အက်ဖ်ပီအနေနဲ. အမျိုးသမီးများအတွက်အခြေခံသုံးပစ္စည်းများနှင့် အိမ်တွင်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ကလေးမွေးနိုင်ရေးအတွက်ထောင်နဲ.ချီသော သီသန်.စီစဉ်ပေးထားသော အထုပ်လိုက်ပစ္စည်းများကို ဘေးသင့်မြို.နယ်များတွင်ရှိ ကျန်းမာရေးဌာနတွေဆီ ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
ရပ်ဝေရွာဒေသများတွင် ကလေးမိခင်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်ပေးမည့် ဆေးခန်းငယ်များဖွင့်နိုင်ရေးအတွက် ဒေါက်တာဆရာဝန်တွေကို စုဆောင်းနေပါသည်၊ပြီးတော့၊ကလေးမွေးမည့်မိခင်များအတွက်ဆေးရုံကို အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက် အဆင်သင့်စောင့်နေသောအိမ်များကိုလည်ဖွင့်ထားပါသည်။
ရန်ပုံငွေဟာ မိခင်များအသက်ရှင်နိုင်ရေး၊အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီမကူးဆက်ရေး၊ နှင့် လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေးအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်နေသော အဖွဲ.အစည်းအသီးသီးမှ ဆေးအလုပ်သားများကိုလည် သင်တန်းပို.ချရန်ရှိပါသည်။
ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင်ပျက်စီးနေသော ကလေးမွေးဖွားအခန်းများပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေး လုပ်ငံများပြန်လည်မွမ်းမံတိုးချဲ.ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးလုပ်ငံဆောင်ရွက်သူများနဲ. ပူးပေါင်းဖို.အစီစဉ်များလည် ရှိသည်။
ယူအန်အက်ဖ်အနေနဲ. အခြားအဖွဲ.အစည်းများနဲ.ပေါင်းပြီး ဆိုင်ကလုန်ကြောင့် ပူဆွေသောကပရိဒေဝဖြစ်နေသော အမျိုးသမီးများအတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးရန် နှင့် ကျရောက်ခဲ့သော ဘေးဒုက္ခကြီးများကြောင့် စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်းမစွမ်းဖြစ်နေသောအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်ကလေးများအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်စားမှုနှင့် အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို. လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
Myanmar Recovery Must Ensure Women’s Health and Protection, UNFPA Says
Email: gharzeddine@unfpa.org William A. Ryan